अब मोबाइल हराउँदा कुनै चिन्ता नलिनुहोस् अायो यस्तो प्रविधि ! – Everest Dainik – News from Nepal
अब मोबाइल हराउँदा कुनै चिन्ता नलिनुहोस् अायो यस्तो प्रविधि !
अझै अर्काे खुशीको कुरा त के छ भने हराएको या फुटेको मोबाइलबाट ‘डाटा’ या फाइल हराउने छैनन्, सबै भेटिने छन् । किनभने मोबाइल हराउनु अगावै तपाईंको मोबाइलका सबै डाटाहरु त्यो कम्पनीमा सुरक्षित रहेका हुन्छन् । तर तपाईंले आफ्नो मोबाइल किनेको मूल्यको पाँच प्रतिशत रकम भने तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष यो रकम तिरेर उक्त कम्पनीमा दर्ता हुनुभयो भने सो सेवा पाइन्छ ।
ट्याग्स: smart mobile